China AIRCOOL Commercial Ceiling Fan / Cooling Fan Manufacturing and Factory | Kale
AIRCOOL Commercial Ceiling Fan / Cooling Fan
Fanamafisana herinaratra lafo vidy mitsitsy angovo 6.5FT 8FT 10FT Big HVLS Ceiling Fans
Misy modely telo amin'ny mpankafy valindrihana aircool, ao anatin'izany ny 6.5ft, 8ft, 10ft. Ity dia maodely lafo vidy miaraka amin'ny herin'aratra, afaka manome rivotra avo be miaraka amin'ny fitsitsiana angovo ho an'ny gymnasium, trano fisotroana kafe, birao ary trano fisakafoanana. Ny andiany Aircool no mpankafy valin-drihana lehibe mahazatra indrindra, tena mitsitsy angovo ary mitsinjo ny tontolo iainana ary azo antoka. Ny lelany mpankafy dimy dia mety hamokatra rivotra be, mora apetraka sy miasa.
Ny andiany KALE Aircool dia safidy tokana ho an'ny habaka ara-barotra sy lehibe. KALE Aircool fan valindrihana dia safidy ara-tontolo iainana sy lafo raha ampiasainao amin'ny tanjona ara-barotra. Raha ampitahaina amin'ny mpankafy nentim-paharazana, KALE AIRCOOL valin-drihana mpankafy dia tena mahomby angovo sy ny tontolo iainana, ny faritra fandrakofana ny iray napetraka mpankafy dia mety ho mihoatra ny 250㎡. Ity modely ity dia ampiasaina betsaka amin'ny toerana ara-barotra, toy ny birao, fivarotana kafe, toeram-pisakafoanana ary toeram-pisakafoanana. Feno rivotra feno, rivotra feno eny amin'ny habakabaka, mahazo aina sy mahasalama.
Ireto ny tombony azo avy amin'ny fantson-drivotra Aircool:
1. Six Magnesium Alloy Blades
2. Habe azo ampiasaina: 6.5ft (2m), 8ft(2.5m), 10ft(3m)
3.Maharitra Magnet Synchronous Motor
4. Inverter/VFD controller
5. Mitsitsy angovo & tena mahomby
6. Loko misy: Fotsy, Volafotsy ary Mainty
Ny motera synchronous magnet maharitra (PMSM) dia fifandimbiasana eo amin'ny motera induction sy motera DC tsy misy borosy miaraka amin'ny hakitroky ny hery ambony kokoa noho ny motera induction. Noho ny tombotsoany, ny maotera synchronous maharitra dia vahaolana malaza amin'ny fiara elektrika.KALE aircool valin-drihana mpankafy mampiasa andriamby maharitra synchronous Motors.
Ny rafitra fanaraha-maso ny fantson-drivotra Aircool dia novolavolain'ny KALE FANS tsy miankina. Ny tontonana fanaraha-maso dia tena hendry ary mora ampiasaina. Araka ny hitantsika, rehefa manomboka ny mpankafy amin'ny alalan'ny fanodinkodinana kely ny bokotra, ary afaka mifehy ny rivotra ihany koa amin'ny alalan'ny bokotra eo amin'ny switch. Ity rafitra fanaraha-maso ity dia fampisehoana avo lenta mba hahazoana antoka fa ny mpankafy dia afaka mandeha tsara mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny tabataba ambany.
MODELY SHVLS-D5BAA30 Ampahany SHVLS-D5BAA25 SHVLS-D5BAA20
Size 10ft (3.0m) 8ft (2.5m) 6,5ft (2,0m)
Haben'ny rivotra max 5100m³/min 4200m³/min 3900m³/min
Max Speed 110 RPM 130 RPM 150 RPM
Weight Body 44KG 41KG 38KG
fahefana 0.2KW 0.15KW 0.13KW
Voltage fampidirana 220V/1P 220V/1P 220V/1P
Ambaratonga tabataba 43dB (A) 43dB (A) 44dB (A)
Manana ekipa injeniera za-draharaha momba ny herinaratra, makanisma ary maritrano izahay izay hanome ny drafitra fametrahana mety indrindra ho an'ny rafitra samihafa araka ny famakafakana ny adin-tsaina, ary afaka mametraka mpankafy ho an'ny rafitra mahafeno fepetra.
Fantatsika rehetra fa dingana tena iankinan'ny aina ny fametrahana, ka mandritra izany, ny fitsipika henjana sy ny fenitry ny fametrahana ary ny asantsika dia tsy maintsy manafoana ny fisalasalanao rehetra.
1, drafitra fametrahana namboarina;
2, ampy fitaovana amin'ny fiainana kamiao;
3, traikefa manankarena amin'ny debug ny haavony, ny haavony ary ny fifandanjana;
4, Fitsapana fifandanjana mavitrika, ataovy azo antoka fa mihazakazaka tsy tapaka;
5, Fasteners amin'ny Torque fenitra, hahatratra ny tsara indrindra fastening;
6, Fohy & siantifika fametrahana dingana.
teo aloha: EURUS III Classic Industrial Ceiling Fan
Manaraka: DIAMOND Commercial HVLS Ceiling Fan
Fankafy valin-drihana lehibe ara-barotra
Fankafana valin-drihana lehibe ara-barotra
AIRCOOL malaza HVLS Large Ceiling Fan